९६ वर्षीया हजुरआमा ज्वाईँलाई पछि पार्दै क्लास टपर ! - Everest Dainik - News from Nepal
९६ वर्षीया हजुरआमा ज्वाईँलाई पछि पार्दै क्लास टपर !
भारतको केरलामा ९६ वर्षीय कार्तियानी अम्माले आफ्नो ज्वाईँलाई पछि पार्दै कक्षा टप गरेकी छिन् । केरलामा साक्षरता कार्यक्रम अन्तर्गत भएको परीक्षामा ९८ प्रतिशत अंक ल्याउँदै उनी कक्षा टप गर्न सफल भएकी हुन् । यो कार्यक्रम केरल राज्य साक्षरता अन्तर्गत शुरू गरिएको हो ।
राम्रो साक्षरता दर भएको राज्य केरलले शतप्रतिशत साक्षरताका लागि यो कार्यक्रम शुरू गरेको हो । कार्तियानीसँगै उनका ज्वाईंले पनि तीन कक्षाको परीक्षा दिएका थिए तर सासूभन्दा १० नम्बर कम ल्याए । कार्तियानी भन्छिन्, ‘म र मेरा ज्वाईं दुवैले परीक्षा दिएका थियौं । तर उनले परीक्षामा उत्तर बिर्से । मैले सबै सही उत्तर दिएँ ।’
उनका ज्वाईंले मात्रै ८८ प्रतिशत ल्याएका छन् । बीबीसी संवाददातासँग कुरा गर्दै उनले भनेकी छिन् ‘म अब पढिरहने हो । छिट्टै चार कक्षामा पुग्छु । म सय वर्ष हुँदा दश कक्षा पास भैसक्छु । त्यसपछि सरकारी जागिर भए हुन्थ्यो ।’ उज्यालो अनलाइनबाट
ट्याग्स: Class Tapper, कार्तियानी अम्मा